Melbourne Tram Inoshanda paSolar Power - RayHaber
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 61 Australia, THE WORLD, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, OCEANIA, chitima 0
Solar powered bus kubva kuIETT 20 / 08 / 2015 bhazi dzinofambiswa ne simba kubva zuva İETT: Istanbul Electricity Tramway uye Tunnel Enterprises vokutanga inoshandisa simba rezuva dzomumaguta mabhazi mabhazi (IETT) Turkey kwakaita yakataurwa, akaita nguva yokutanga. Turkey yokutanga kwezuva dzakarovererwa mapuranga ruzhinji bhazi mu Istanbul Electricity Tramway uye Tunnel Enterprises (IETT) yaiswamo nguva yakataurwa. Purojekiti yekutanga yeprojekti yekufambisa yekuchengetedza simba uye mafuta zvakagadzirwa pakati pe Topkapı Eminönü. Bhasi inotarisa kutarira nehutwo hwahwo uye ine huwandu hwe15 solar panels. Bhasi haisi kukonzera kupisa kwenyika nekuti haisi kusunungura carbon dioxide nokuti inobereka simba rinogona kushandiswa paunenge uchichengetedza bateri. Dzezvakatipoteredza ...
Zvose zvitima muHolland zvinoshanda nemhepo ine simba 12 / 01 / 2017 Zvose zvitima muNetherlands zvinomhanya nesimba remhepo: matavi emagetsi anopa imwe nzira yekufambisa inogara yakachengeteka ichienzaniswa nemotokari nokuti inoshambadza zvishoma. 1 January Sezvo 2017, kambani yeDutch yenharaunda yeNSC yakazivisa kuti chirongwa chegore re 10, chakaitwa naEneco, kambani yemagetsi, kuti iite zvese teresi munyika ine simba remhepo. Dhamashamba emakambani ezvitima, aida kuderedza zvakanyanya kukonzerwa nemitima, akabatana naEnoeco mu2015. Maererano nezvirongwa, 100 muzana yemashandisirwo emagetsi anoshandiswa kugadziriswa kuwanikwa pa2018, asi apo 2016 muzana yakazosvika mu 75, chirongwa cheurongwa
Kushamisika chitima chine simba remhepo 22 / 09 / 2015 Chitima chinotungamirwa nemhepo chinovhundutsa: Inyanzvi yezvakatipoteredza yakagadzirirwa kuti kudzivisa kushanduka kwemamiriro okunze kusinganzwisisiki semugumisiro wekudziya kwepasi kunokonzera miganhu yezvinhu zvitsva. Nyika yeNetherlands yakanga ichivaka zvikepe zvinotungamirwa nemhepo, apo panopisa masikati akaiswa mumigwagwa yegetsi muSouth Korea neUnited States. Green technologies yakagadzirirwa kubvisa magasi emagetsi anopisa anotyisa nyika yakatanga kuderedza ngozi dzekudziya kwepasi rose. Kunyanya kugadzirwa kwenyika uye marongerwo enyika zvakagadzirisa mhepo dzinoshanda mumhepo yakasvibirira, mhirizhonga inotora simba ravo guru kubva kunezuva, migwagwa inowanikwa nekutengesa teknolojia, masheji ezuva uye mavhavhari. Inonyanya kunakidza inyanzvi yezvakatipoteredza munyika ...
Achaita naHama adziviswa chose kudyidzana pamwe Wezvitima Zviduku Anova Project 07 / 01 / 2014 Mansion Trams achaputsa zvachose panyaya Project: Chamber Izmir Branch President Hasan Topal, guta kwabva pamwe achiri 6-mudungwe boulevards zviri maererano mugungwa, akati ivo havazivi kuti vakanyanyisa chitima mutsetse. Izmir Metropolitan Municipality ari kugadzirira dzika uye 26 Fahrettin akazivisa kuti kubva kuna rudo February Altai-hondo-Halkapınar chitima mutsetse nzira chikamu ine Mustafa Kemal Seaside Boulevard of Chamber Architects yakauya mhinduro kubva Izmir Branch. achiri richibatanidza gungwa-mukoto Boulevard pamwe 6 richivezwa, ivo akatiwo vanowana kodzero chitima mutsetse kuti rakawedzerwa Chamber Izmir Branch President Hasan ...
Vashandi Vecheji Vanorova muMelbourne 10 / 08 / 2015 Vashandi Vemotokari yeMelbourne Vanorova: Musangano wevashambadzi veMelbourne vakasarudza kuuraya kwemazuva maviri. Nyanzvi dzakati mazuva maviri ekutsvaga pazvitima, izvo zvinoita basa rinokosha munharaunda yekutakura kweguta racho, zvinogona kuparadza simba reguta. Railway Trolley uye Bus Union, chisarudzo chisina kubvumirana chisarudzo chevashandi veRTBU vachakuvadza zvikuru Metro Trains. Pamusana pekutsvaga, kutonga kwetikiti hazvizogadziridzwa kwemaawa 48, masuo etikiti achasara akazaruka. Mukuwedzera, zvitima zvichakwanisa kudarika zviteshi zvinoda kumira. I RTBU union, inomiririra vashandi, yakagara ichipesana nevatungamiri vezvitima pamusoro pevashandi vevashandi. Union Secretary Luba ...
Solar powered bus kubva kuIETT
Kushamisika chitima chine simba remhepo
Achaita naHama adziviswa chose kudyidzana pamwe Wezvitima Zviduku Anova Project
Vashandi Vecheji Vanorova muMelbourne
Rail System Zviitiko: Motokari Yezvokuchengetedzwa Kwezvitima 2013 - Melbourne
Basa rokutanga rakagadzirwa pakugadzirwa kweimba yeHigh Speed ​​Train
ESHOTta nguva yezuva inopera simba inotanga
Nhau Archive Sarudza mwedzi October 2019 (304) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Range 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Range 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Range 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Range 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Range 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Range 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Range 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Range 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Range 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Range 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Range 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Range 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Range 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) October 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Range 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)